Xaaladda Soomaaliya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Publicerat fredag 16 juni 2006 kl 16.44
Wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Mareekanka Condoleezza Rice ayaa ka codsatey sidii ey dawladda Noorwey horjoog ugu noqon laheyd howsha dhexdhexaadinta nabdda ee dalka Soomaaliya, sida uu sheegey Jonas Gahr Störe oo ah wasiirka arrimmaha dibadda ee dalkaasi Noorweey.
Rice waxey aad uga qushuucdey tallabada ey dawladda Noorwey ku dhaqaaqdey sidii ey isugu keeni laheyd kulan ka dhacey magalada New york, sida ey masuuliyaddaasi sheegtey kulankaa kadib oo dhacey maalintii khamiista taariikhduna aheyd 15-ka bisha Juun ee sannadka 2006-da.
Kulanka midkani ku xiga wuxuu ka dhici doonaa magaalada Istockholm bisha Juulaay ee isla sannadkan.
Dalka Soomaaliya waa dawlad aan laheyn maamul dhisan una baahan sidii middaa wax looga qaban lahaa, sida uu sheegey Större mar uu la hadlayey idaacadda NTB.
Marka laga reebo dalalka Noorweey iyo Mareeykanka waxaa sidii kale kulankaasi ka soo qeyb galey waddamo ey ka mid yihiin carriga boqortooyada Ingiriiska, Talyaaniga iyo Tanzaaniya.
Kulankaasina oo ka dhacey magaalada New York ayaan lagu casumin xubno ka socda dawladda Federaalka ee ku meelgaarka.
Muddadii uu kulankaasi socdey waxey mudane Condoleezza Rice shaaca uga qaadey dhigeeda wasiirka arrimmaha dibadda ee dalka Noorwey in dawladeedu ku talo jirto sidii ey aasaas cusub ee siyaasadeed uga abburan laheyd dalka Soomaaliya. Iyadaoona ku dhiiri gelisey in la joojiyo dagaalada carrigaasi ka socda.